DOANY MIARINARIVO MAHAJANGA : Olona telo naratra ka vehivavy bevohoka ny iray noho ny fifandonana
Niantso mpanao gazety ny mpiara-mitantana ny doany Miarinarivo ny alatsinainy teo, nanambara ny fahatelo Tsimihambo fa novakian’ ny ampanjaka Jean Noel ny varavaran’ny zomba Andriamisara efa-dahy manan-kasina ny alatsinainy maraina tamin’ny enina ora maraina ary novainy ny lakile. 17 octobre 2019
Niantso mpanao gazety ny mpiara-mitantana ny doany Miarinarivo ny alatsinainy teo, nanambara ny fahatelo Tsimihambo fa novakian’ ny ampanjaka Jean Noel ny varavaran’ny zomba Andriamisara efa-dahy manan-kasina ny alatsinainy maraina tamin’ny enina ora maraina ary novainy ny lakile. Mbola tsy nisy izany hatramin’ny nisian’ny doany Miarinarivo. Nanambara moa ny solontenan’ny ampanjaka Rasamimanana fa ny zoma teo no nanidy ny doany izy ireo, mba hifandaminana aloha.
Ny zava-misy anefa dia novakian’ny ekipan’ny ampanjaka Jean Noel sy ireo mpanaraka azy an-keriny ny doany… ka nanapa-kevitra izahay, hoy izy ireo niantso ny mpitandro filaminana saingy tsy tonga izy ireo. Noho izany dia nosoloinay vaovao indray ny lakile. Manambara amin’ny olona rehetra sy ny tompon’andraiki-panjakana izahay, hoy izy ireo, fa tsy fantatray raha misy zavatra tsy ao intsony na tsia. Raha mbola misy ny fikirizana hanimbazimba na handroba ny zombabe dia tsy miankina aminay intsony fa ny fokonolona sy ny razan’olona no hitsangana hanao ny ainy tsy ho zavatra hiaro izany, hoy hatrany izy ireo.
Samy milaza ho tompon’ny doany Miarinarivo avokoa ireo milaza ho taranaka ampanjaka sy ampanjaka ao amin’ny doany efa-dahy manan-kasina ao. Ny ampanjaka moa miova isan-taona, esorina averina, esorina averina… Asandratra ahetry… Toy izany koa ireo mpiara-miasa aminy… ovaina ny fahatelo, dia averina indray…. Ny manantany sy lehiben’ny varavarana koa mbetika miaraka amin-dRasamimanana, mbetika miaraka amin’ny Soamody, mbetika miaraka amin’i Guy, ary mbola miaraka amin’i Jean Noel ihany koa… Raha tsy izany dia asiana fiaraha-mitantana, toy ny tamin’ny fanompoabe farany teo ka nahitana ireo ampanjaka nisesisesy tao, afa-tsy Richard Djaofeno niara-nitarika ny fanompoabe… nefa mbola nisy ihany ny fanilihana sy fitadiavana ady tamin’ny ampanjaka Guy avy eo.
Tsy fantatra intsony izay tena ampanjakabe marina ao amin’ny doany Miarinarivo ao, satria olona miisa efatra no nolazaina tato anatin’ny 10 taona mahery fa samy ampanjakabe daholo ary samy efa nahazo ny tso-drano maha mpanjaka… Anisan’izany Rasamimanana, Guy, Djaofeno, Soamody ary Jean Noel…. Miisa dimy izany ireo ampanjakaben’i Boeny ary samy mbola velona avokoa…. Lasa kilalaon-jaza ny fitantanana ny doany ao satria izy mianakavy ihany no mifanongana ao, ary ahiana hamery hatramin’ny hasin’ny doany efa-dahy manan-kasina araka ny nambaran’ireo taranaka ampanjaka avy any Menabe. Miantso ny mpitondra fanjakana hatrany izy ireo nefa rehefa misy ny fanapahan-kevitra na dia iraisana aza dia tsy manaja ny fanapahan-kevitra iarahana hatrany ny an-daniny na ny an-kilany, ary mifandimby manome tsiny hatrany ny tompon’andraiki-panjakana. Samy milaza ho mahay ny fomba avokoa izy ireo, ary voatonontonona hatramin’ny anaran’ny Filoham-pirenena sy ny prefe eto Boeny, izay omena tsiny fa tsy mandray andraikitra na lazaina koa fa manome vahana ny an-daniny na ny an-kilany, rehefa tsy mety amin’ny an-kilany na ny an-daniny… Lasa arangaranga hatrany ny ra mandriaka sy ny korontana hanerena ireo mpitondra fanjakana hiditra amin’ny raharaha doany io, nefa na amin’ny disadisa eo amin’ny doany atsimo sy doany avaratra mikasika ireo mitahy na ‘reliques’ izay nalaina tany Menabe aza efa misy didim-pitsarana mivoaka efa taona maro nefa tsy manaiky ny hampiharana izany ny doany atsimo, ary tsy misy sahy miditra manery ny fampiharana azy ireo tompon’andraiki-panjakana maro nifandimby.
Telo no naratra
Olona telo no naratra noho ny fifandonana tao amin’ny doany Miarinarivo ny alatsinainy teo ka vehivavy bevohoka ny iray. Ny maraina tamin’ny enina ora dia tonga teny ny tariky ny ampanjaka Jean Noel namaky ny hidin’ny varavarava ka nanolo izany vaovao. Ny antoandro dia tonga teny koa ny ampanjaka Soamody solontena napetraky ny ampanjaka Rasamimanana teny amin’ny doany Miarinarivo hatramin’izay sy ny fahatelo Tsimiambo ary Toly manan-tany Rasininto namaha ny lakile napetraky ny tariky ny ampanjaka Jean Noel teo ary nanolo izany vaovao. Nisy ny fifandonana ka nahatonga ireo olona ireo naratra. Olona maromaro ihany koa no efa nosamborin’ny mpitandro filaminana. Araka ny nambaran’ny tariky ny manan-tany Tsimiambo sy ny ampanjaka Rasamimanana moa dia voatonona ny anaran’ny prefe sy ny Filoham-pirenena izay lazaina fa nanome alalana ny ampanjaka Jean Noel hanao fanakorontanana…
Ny zava-misy kosa dia miantso hatrany ny mpitondra fanjakana hanelanelana sy handamina izy ireo nefa kosa misy hatrany ny ilany tsy manaiky izay fandaminana atao eo, ary manome tsiny. Samy milaza fa manana ny marina ary mitondra ny raharaha eny amin’ny Fitsarana nefa tsy manaiky izay didy avoakan’ny Fitsarana. Taona maromaro izay tamin’ny olana nisy teo amin’ny ampanjaka Guy sy ny ampanjaka Djaofeno Richard dia tonga teto Mahajanga ny fikambanamben’ireo ampanjaka sy taranaka ampanjaka manerana an’i Madagasikara handamina. Saingy nanao tari-dositra rehefa nahazo fandrahonana fa hotapatapahina. Misavoritaka ny samy ampanjaka, miady ny samy mpiara-miasa, tsy fantatra intsony izay mpanapaka satria samy milaza ho tompon’ny doany sy ny fahefana na ny ampanjaka voatendry sy nifandimby teo, na ireo mpiara-miasa aminy na fahatelo na manan-tany na lehiben’ny varavarana.